Culeysyo hor leh oo ku soo kordhay Doorashooyinka Somaliya – AfmoNews
Culeysyo hor leh oo ku soo kordhay Doorashooyinka Somaliya
Prof. Afyare Cabdi Cilmi ayaa faah faahiyay qodobada leesku diidan yahay ee doorashooyinka dalka iyo culeysyada xilligan ku soo kordhay doorashooyinka uu muranka badani hareeyay.
“Waxa hadda leesku hayaa waa uun shan qodob oo keliya. Qodobka 1aad waa guddiyada maamulaya ee dadka tartamaya u garsooraya, sida ay ku imaanaayaan iyo halbeygyada laga rabo inay buuxiyaan.” Ayuu yiri Prof. Afyare Cabdi Cilmi.
Afyare oo qodobadaan sii faah faahinayay ayaa yiri “Waxaa kaloo ayadana runtii muhiim ah haweenka boqolkiiba soddon (30%) inay hellaan waaye, mab’da guud oo leesku waafaqsan yahay waaye, laakiin kuraastaas marka loo qoondeynayo iyo habka loogu qoondeynayo weli siyaasiyiintu way ka meer-meerayaan, ma cadda.”
“Anu waxaan aaminsanahay wax adag meeshaan ma yaallaan, haddii rabitaan jiro, oo nimankan madaxda ah hadda dee ku adkey, ku giiji iyo waxaasaa ka socdo meesha, laakiin haddii rabitaan jiro waxaan wax adag maaha, waa wax si sahlan looga gudbi karo, yaan dadka lagu dhibin, dalkana aan lagu gelin qalqal siyaasadeed.” Ayuu yiri Afyare Cabdi Cilmi.